Ungathola kanjani ama-backlink afanele ngezindlela ezilula?
Kungenzeka ukuthi uke wazizwa ezihlokweni zethu zangaphambilini mayelana nokubaluleka kokwakhiwa kwesixhumanisi sokwenza ngcono iwebhusayithi. Ama-backlink abalulekile ku-SEO ngenxa yenani lezinto ezihlukile - zithuthukisa ukubonakala kwewebusayithi ekhasini lomphumela wosesho; baphakamisa igunya lewebhusayithi emehlweni e-Google; badala ukugeleza kwe-traffic njalo kwiwebhusayithi, nokwandisa idumela lesizinda. Ngakho-ke, uma ufuna ukwakha iphrofayli enamandla yokuxhumanisa ukuze ukwandise umzila wakho wokusesha injini, udinga isu elihle le-backlink elikusebenzelayo.
Ake sithi amanye amagama mayelana nendima ye-backlink inqubo yokuthuthukisa. Ama-backlink awumqondo olula - uma esinye isixhumanisi sixhumanisa kuwe, ukuthi isixhumanisi sangaphandle kubhekwa njenge-backlink. Indima ebalulekile ekusakhiweni kwesixhumanisi idlala izinga lomthombo wamthombo lapho ukuxhumana kuyeza khona. Izinjini zokucwaninga zihlola ikhwalithi ye-backlink ngenani lezinqubo ezithile ezibandakanya igunya le-domain, inombolo kanye nekhwalithi yezixhumanisi zangaphandle ezikhomba lesi sizinda, ukubaluleka kokuqukethwe kumthombo wewebhu oxhunyiwe, njalonjalo. Uma zonke lezi zindlela zibonisa umphumela omuhle, umthombo wewebhu uzothola isikhundla esiphakeme.
I-backlink ngayinye inikeza inani elithile lejusi lokuxhumanisa ngokusekelwe kwidumela, umlando, negunya layo emkhakheni othile wemakethe. Ngakho-ke, i-backlink evela emithonjeni ephezulu ye-PR 9 noma engu-10 yemithombo ye-intanethi iphumelela kakhulu kune-backlink ezinamazinga aphansi kusuka kumawebhusayithi axhumano we-spammy angenayo inani labasebenzisi.
Nakho konke okushiwo, uma ufuna ukuthola isikhundla ekhasini lekhasi lokusesha le-Google, udinga ukuthola ama-backlink afanelekayo nekhwalithi kusuka kumawebhusayithi aphezulu we-PR.
Kulesi sihloko, sizoxoxa ngezindlela eziningana eziyinkimbinkimbi ukuthi ungayithola kanjani kalula ama-backlink quality. Sethemba ukuthi lezi zindlela zizokusiza ubeke isayithi lakho ngamagama wakho okucinga okuhlosiwe. Ngakho-ke, ake sihlolisise lezi zindlela zokwakha izixhumanisi.
Izindlela ezilula zokuthola i-backlink kusayithi lakho
Ngokubhala ubufakazi bekhwalithi, uthola ithuba lokucebisa iphrofayli yakho ye-backlink nge-backlink efanelekile kusuka kumasayithi asemthethweni. Noma nini lapho uthenga imikhiqizo ethile noma amasevisi afanele ukukweleta isikweletu sakho, ungashiya ubufakazi ku-vendor site. Ubufakazi buvame ukuba nokuxhumanisa nesayithi lakho phakathi kwabo ukufakazela ukuthi ubufakazi buyadalwa. Kuzokusiza ukuthi uthole ama-backlink alula kusayithi lakho ngaphandle kokuchitha noma yimaphi ama-cent. Uma bebeka isixhumanisi esingenalutho esivumelwaneni sakho, ungawacela ngomusa ukuba asishintshe ku-dof elandela isixhumanisi esibukhoma.
Ungathola izincwadi eziningi ze-RSS emhlabeni wonke ovumela abasebenzisi ukuhlola amabhulogi, amaforamu, noma imithombo yewebhu ngezihloko ezihlukahlukene. Kuyithuba elihle kunoma iyiphi iwebhusayithi ukuthola i-backfink ye-dofollow yamahhala kusuka kwenye yalezi zincwadi ezifanele. Konke okudingayo ukuhambisa ukuphakelayo kwakho kwe-RSS kulezi zincwadi. Ungenza ngesandla, noma ngokuzenzakalelayo. Uma ungathanda ukukwenza ngokuzenzakalelayo, ungasebenzisa uhlelo olubizwa ngokuthi i-Fast RSS Submitter. Lolu hlelo luzokusiza ukuthi uthumele isizinda sakho kumarekhodi angaphezu kuka-100 we-RSS ngokuzenzakalelayo, ugcine isikhathi esiningi nemizamo Source .